Indawo: Ikhaya » Ukuthumela » Izindaba Zocingo » Ukugaywa kabusha ku-Mars: Kusukela ku-Old Packing Material kuya ku-New Poop
I-HeroX, inkundla ehamba phambili kanye nemakethe evulekile yezisombululo ezigcwele abantu abaningi, namuhla yethule umncintiswano we-crowdsourcing, "Waste to Base Materials Challenge: Sustainable Reprocessing in Space". Ukuthunyelwa kwabantu esikhathini esizayo ku-Mars kanye nohambo lokubuyela eMhlabeni kulindeleke ukuthi kuthathe iminyaka emibili kuya kwemithathu. Ngalesi sikhathi, amanani abalulekile emfucumfucu azokhiqizwa. I-HeroX ifuna izindlela ezintsha zokusebenzisa kabusha, ukugaywa kabusha, kanye nokucubungula kabusha imfucumfucu ekhiqizwe emkhunjini ukuze ikwazi ukusimama.
Njengoba ukusebenza kwemikhumbi yokuhlinzeka ukuze isekele umkhankaso we-Mars kunzima kakhulu, umkhumbi-mkhathi udinga ukusebenza kahle futhi uzimele ngangokunokwenzeka. Le nselelo imayelana nokuthola izindlela zokuguqula imfucuza ibe izinto eziyisisekelo nezinye izinto eziwusizo, njenge-propellant noma i-feedstock yokuphrinta kwe-3D. Inselele iwukuba ubheke imibono yakho yokuthi ungayiguqula kanjani imifudlana yemfucuza ehlukene ibe i-propellant futhi ibe izinto eziwusizo ezingase zenziwe zibe izinto ezidingekayo bese ziqhutshwa ngamabhayisikili izikhathi eziningi. Nakuba umjikelezo osebenza kahle kakhulu ungenakwenzeka, izixazululo ezifanele zizoholela ekumosheni okuncane. I-NASA ingagcina ihlanganise zonke izinqubo ezihlukene zibe i-ecosystem eqinile evumela umkhumbi-mkhathi ukuthi uqalise usuka eMhlabeni ngesisindo esincane kakhulu ngangokunokwenzeka.
Inselele: I-NASA's Waste to Base Materials Challenge icela umphakathi omkhulu ukuthi unikeze izindlela zokusungula zokulawula udoti kanye nokuguqulwa emikhakheni emine ethize:
• Udoti wendle
• Izinto zokupakisha ezinegwebu
• Ukucutshungulwa kwe-carbon dioxide
Umklomelo: Abaphumelele abaningi esigabeni ngasinye bazonikezwa umklomelo we-$1,000 ngamunye. Ukwengeza, amajaji azobona imibono emine ngokuthi "ehamba phambili ekilasini," ngayinye inomklomelo we-$ 1,000. Isamba semali engu- $ 24,000 sizonikezwa.
Ukufaneleka Ukuncintisana Nokuwina Imiklomelo: Umklomelo uvulekele noma ubani oneminyaka engu-18 noma ngaphezulu obambe iqhaza njengomuntu oyedwa noma njengeqembu. Izimbangi ngazinye namaqembu angase aqhamuke kunoma yiliphi izwe, inqobo nje uma unswinyo lukahulumeni wase-United States lungakwenqabeli ukuhlanganyela (eminye imikhawulo iyasebenza).
ngamunye NASA kabusho imikhiqizo esisebenzile I-united states